कत्रो नङ ! – Sourya Online
कत्रो नङ !
सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन २४ गते ४:५१ मा प्रकाशित
न्युर्योक, २३ फागुन । नङ पाल्नु कतिपयका लागि सोखको विषय हो । महिलामा यस्तो सोख बढी हुने गर्छ । तर, यसले आफ्नो स्वास्थ्य र दैनिक क्रियाकलापमै असर पु¥यायो भने कसले नङ काट्दैन होला र ? तर, ५४ वर्षीया आयना भने अरूभन्दा भिन्न छिन् । ‘मरे पनि म नङ काट्दिनँ । नङ मेरो आधा हिस्सा हो, यसलाई म कसरी काटेर मिल्काउन सक्छु ?’ नङ काट्न सल्लाह दिनेलाई उनले यस्तो जवाफ दिने गरेकी छन् ।
२४ वर्षकी हुँदादेखि हातको नङ पाल्न सौखिन आयनाले खुट्टाको नङ नकाटेको पनि धेरै भइसकेको छ । उनका खुट्टाका नङ चार इन्च लामा छन् । नङ लामा भएपछि हिँडडुल गर्न पनि उनलाई अप्ठेरो हुन थालेको छ । यसले उनको स्वास्थ्यमा असर पु¥याइरहेको भए पनि नङ काट्ने कुरा सोच्नसम्म उनले भ्याएकी छैनन् । अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल टिएलसीको ‘माई स्ट्रेन्ज एडिक्सन’ कार्यक्रममा हालै देखा परेकी आयनालाई ‘नङप्रतिको यत्रो मोह किन ?’ भनी सोध्दा उनले भनिन्, ‘नङ मेरी छोरीजस्तै हो, जो ज्यादै ‘सेक्सी’ छे, मलाई आपूm नङ भएकी देवी हुँ जस्तो लाग्छ ।’
केही समयअघि डाक्टरले आयनालाई मधुमेह लागेको पत्ता लगाएका थिए । उपचारका लागि उनले व्यायाम र शारीरिक काम प्रशस्तै गर्नुपर्ने डाक्टरको सल्लाह छ । तर, हातखुट्टाका नङ लामा भएका कारण व्यायाम गर्न त परै जाओस्, उनी सजिलोसँग हिँड्न पनि सक्दिनन् । यति हुँदा पनि उनका आफन्त र साथीभाइले नङ काट्न उनलाई मनाउन सकेका छैनन् ।
लामा नङबाट उनलाई सन्तुष्टि मिले पनि यसैले गर्दा उनले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ । नङ ठोक्किने डरले उनी छिटो हिँड्न सक्दिनन्, सिँढी चढ्न पनि उनलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ । सुत्दा नङमा ब्ल्याङ्केट अड्किने हुँदा उनले बढी चनाखो हुनपरेको छ । उनी मोजा लगाउन सक्दिनन्, जुत्ता पनि जुन पायो त्यही लगाउन सक्दिनन् । जतिसुकै अप्ठेरो भए पनि नङ काट्नु उनको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरो हो । ‘ज्यान जाला तर म नङ काट्दिनँ,’ आफ्नो अड्डीमा उनी अटल छिन् । (डेलिमेल)